छाँया अर्थमन्त्रीले संसदमा देखाए पावर, खतिवडालाई तनाव::News from Nepal
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट पेश गर्दा बजेट पुस्तिकामा त्रुटि भएको भेटिएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले उक्त त्रुटिबारे जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए ।
‘सरकारले बजेटको अनुसूची १ मा आर्थिक वर्ष ७५÷७६ को संशोधित अनुमान पेश गरेको छ । त्यसमा त्रुटि छ । त्यो त्रुटिको गम्भीर प्रभाव रहन्छ । अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिइकन बजेटका बारेमा छलफल गर्नु उचित हुन्न’ उनले भने ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा चालु खर्च ७ सय ८३ अर्ब, पूँजीगत खर्च २ सय ७३ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था १ सय ५३ अर्ब रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यस अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ८ अर्बको स्रोत साधन चाहिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
कांग्रेस नेता रिजालका अनुसार स्रोत साधन जोहो क्रममा सरकारले राजस्वबाट ८ सय ६० अर्ब राजस्व जम्मा हुन्छ भनेको छ । यो राजस्वमध्ये १ सय २ अर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा संघीय सरकारले खर्च गर्न पाउने राजस्व रकम ७ सय ५८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।
तर बजेट पुस्तिकामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने राजस्व कुल राजस्वबाट घटाउनुको सट्टा जोडेर संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी ९ सय ६२ अर्बको राजस्व अनुमान गरेको छ भन्दै रिजालले त्यो गलत भएको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संघीय सरकारले पाउने कुल राजस्वमा विदेशी अनुदान जोड्दा
८ सय ४ अर्ब सरकारको स्रोत साधन रहन्छ । जसबाट न्युन हुने ४ सय ४ अर्बमध्ये सरकारले विदेशी २ सय १० अर्ब र आन्तरिक ऋण १ सय ७२ रुपैयाँ उठाउने बताएको छ । तर अर्थमन्त्रीले बिगारेको हिसाबअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २२ अर्ब रकम न्युन हुन जान्छ ।
कांग्रेस सांसद रिजालले सरकारले संसदलाई झुक्याएर आन्तरिक ऋण धेरै उठाउन खोजेको आरोप लगाए । संसदले दिएको म्याण्डेटभन्दा बाहिर गएर आन्तरिक ऋण उठाउन नपाइने भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गरे ।
अर्थमन्त्रीले दिए धन्यवाद
जवाफमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले सरकारले उठाउने कुल राजस्वबाट प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने राजस्व घटाउनुपर्नेमा त्रुटिवश जोडिएको बताए ।
‘केही प्राविधिक त्रुटिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व पनि संघीय सञ्चित कोषमा जाने रकममा जोडिएकाले अन्यथा भएकाको हो, त्यसलाई मिलाइसकेको छ’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘त्यसले अरु अंकमा फरक पार्दैन एउटा अंक मिलाउनासाथ अरु अंक सबै मिल्छ ।’ उनले आन्तरिक ऋण १ सय ७२ अर्बभन्दा बढी नउठाउने पनि बताए ।
मन्त्री खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले छोटो समयमा २२ वटा पुस्तिका निकाल्नुपर्ने भएकाले केही त्रुटि भएको बताए । ‘कहिलेकाहीँ भवितव्य पर्दोरहेछ, मेसिनले जोड्नुपर्नेमा हातले जोड्दा घटाउँदा त्रुटि भएको हो’ उनले भने ।
३ दिन दिल्ली बसेर फर्केका धमलाले एकाएक पावर देखाएपछि
नेपाली राजनितीमा हट केक विषय बनिरहेको कुरा हो तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र विच पार्टी एकता हुँदा केपी ओली र प्रचण्ड विच भएको गोप्य सहमतीको खुलासा । गोप्य भनेको सहमती बाहिर आए पछि नेपालमा राम्रै तरंग भयो । नेपाली मिडियाले उक्त बिषयलाई निकै हट केक बिषयको रुपमा चर्चामा ल्याए । देशमा ठुलै तरंग ल्याएको विषय ओली र प्रचण्ड दुवैले भने यो कुनै नौलो बिषय नभएको तर अनावश्यक रुपमा उचाल्न खोजिएको बताएका छन् । खासमा यो विषय आउँनुको मुख्य चुरो के हो त रु प्रचण्ड ओलीले गरेको भनिएको गोप्य सहमती पहिलेनै सार्वजनिक भैसकेको थियो तर त्यसको कसैले चाल पाएनन् ।
पुर्व माओवादी पृष्ठभुमीका एबीसी टेलिभिजनका साहु शुभशंकर कँडेलले आफ्नो एक पुस्तक मार्फत सहमतीको पत्र पहिलेनै बाहिर ल्याएका थिए तर कँडेलको किताब कसैले नपढेका कारण उक्त कुरा बाहिर आएन । जब पत्रकार ऋषि धमलाले गणतन्त्र दिवसका दिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँग अन्तवार्ता गरे त्यस अन्तर्वातमा प्रचण्डले सबै कुरा खुलस्त पारे पछि नेपाली राजिनिती तरंगित भयो । प्रचण्डले आफुले ओलीसँग गरेको सहमती कुनै नौलौ नभएको, किताबमै छापीएर आइसकेको बताएका थिए ।
संयोग चाँहि कस्तो भने प्रधानमन्त्री ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन दिल्ली गएकै बखत प्रचण्डको अन्तवार्ता प्रकारीत भयो र निकै हल्लीखल्ली नै भयो । सत्ता भागबण्डाको कुरा आएकाले अहिलेनै केपी सरकार ढल्न लागेको जसरी पनि चर्चा गरियो । प्राइम टेलिभिजनका लागी ऋषि धमलाले लिएको अन्तवार्ताको वरिपरी सिँगो देश घुम्यो । सितिमिती हाइप्रोफाइल नेताहरु जो पायो त्यहि सँग अन्तवार्ता दिँदैनन् । ऋषि एक मात्र त्यस्ता पात्र हन् जसका लगी जुन सुकै तहका नेता पनि जति सुकै बेला पनि तयार भैहाल्छन् । धमलाकै अन्तवार्तालाई लिएर अन्य मिडियाले पनि समाचार तयार पारेका थिए ।
यता प्रचण्ड सँगको अन्तवार्ताका कारण केपी सरकारलाईनै अस्थिर बनाएका धमलाले आफ्नो पावर फेरि पनि देखाएका छन् । प्रचण्ड सँगको अन्तवार्तामा उठेका सवालको जवाफ ओलीले धमलालाई नै अन्तवार्ता दिएर गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीको सपथ समारोहमा सरिक भएर नेपाल फर्किएका प्रधानमन्त्री ओली विमानस्थलमा पत्रकारलाई कुनै जवाफ नदिइ सिधै बावुवाटा गए ,यसको राज त बल्ल पो खुलेको छ, किनकी धमलालो विमानमै ओली सँग अन्तवार्ता गर्न भ्याइसकेका रहेछन् । चतुर ओलीले सायद नेपाली मिडियालाई घुमाउरो पाराले सबक सिकाए । सबैले धमलाको अन्तवार्ता सुनेरै समाचार बनाउँने भए सबैको अगाडी किन बोल्नुरु धमलाको अन्तवार्ता सुनेर नै समाचार बनाउँनु भने जसो गरी ओली सुटुक्क बालुवाटार गए । विमानस्थलमा गएर जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने धमलाले विमान भित्रै छिरेर जनता जान्न चाहन्छन् भने पछि अरु पत्रकार हेरेको हेरै भए ।
भारतमा लोकसभा निर्वाचनको परिणामा आउँने बेलामा भारतमै पुगेर लगातार सामाचार संप्रेषण गरेका धमलाले एकाएक नेपाल आएर आफ्नो पावर देखाएका छन् । कतिपय आलोचकहरुले उनलाई दिल्लीको नजिकको मान्छे भनेर पनि भन्छन् । धमला राम्रै आलोचनाको सिकार पनि भइरहन्छन् जति आलोचना गरे पनि सबै जना फेरि धमलासँग नतमस्तक नै बन्ने धमलाको जादु के हो बुझ्न सकिएको छैन । केहि दिन लगातार नेपालको राजनिति आफ्नो केन्द्रमा घुमाउँन सफल धमलाले अब के गर्छन् हेर्न बाँकी छ ।